စင်ရော်၊ ရေညှောင့်ကောင်နှင့် အလားတူငှက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
စင်ရော်၊ ရေညှောင့်ကောင်နှင့် အလားတူငှက်များ
စင်ရော်၊ ရေညှောင့်ကောင်နှင့် အလားတူငှက်များ[မှတ်စု ၁] (Charadriiformes) (/kəˈrædri.ɪfɔːrmiːz/ သည် အလယ်အလတ်အရွယ်အစားရှိ ငှက်များဖြစ်ကြပြီး မျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၅၀ ခန့်ရှိကာ ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးတွင် အဖွဲ့ဝင်များရှိသည်။ အချို့ငှက်များမှာ ရေအနီးတွင်နေထိုင်ပြီး ကျောရိုးမဲ့သတ္တဝါများ သို့မဟုတ် အခြားတိရစ္ဆာန်ငယ်များကို စားသုံးကြသည်။ အချို့မှာ ပင်လယ်ငှက်များဖြစ်ကြပြီး၊ ကန္တာရနှင့် ထူထပ်သောသစ်တောများတွင်လည်း တွေ့ရသည်။ ဤငှက်အုပ်စု၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ကမ်းခြေငှက်များဟုလည်း ရည်ညွှန်းသည်။
↑ Bertelli, S. (2013). "Another charadriiform-like bird from the lower Eocene of Denmark". Paleontological Journal 47 (11): 1282–1301. Pleiades Publishing Ltd. doi:10.1134/s0031030113110026. ISSN 0031-0301.
↑ Bertelli, S. (2014). "Erratum to: “Another charadriiform-like bird from the Lower Eocene of Denmark”". Paleontological Journal 48 (13): 1441–1448. Pleiades Publishing Ltd. doi:10.1134/s0031030114130024. ISSN 0031-0301.
↑ Mayr၊ Gerald (2016)။ Avian evolution: the fossil record of birds and its paleobiological significance။ Topics in Paleobiology။ Wiley-Blackwell။ p. 306။ ISBN 978-1-119-02076-9။
↑ "An unbiased molecular approach using 3’UTRs resolves the avian family-level tree of life." (2020). Molecular Biology and Evolution: 143. doi:10.1093/molbev/msaa191.
↑ Černý၊ David; Natale၊ Rossy (2021-07-16)။ "Comprehensive taxon sampling and vetted fossils help clarify the time tree of shorebirds (Aves, Charadriiformes)"။ bioRxiv 10.1101/2021.07.15.452585။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စင်ရော်၊_ရေညှောင့်ကောင်နှင့်_အလားတူငှက်များ&oldid=711686" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၀:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။